Alahelon’ny vahoaka, ala olan’ny mpitondra… | NewsMada
Alahelon’ny vahoaka, ala olan’ny mpitondra…
Alahelon’ny vahoaka eto Antananarivo Renivohitra, am-bodivilany feno arina sady Renivohitr’i Madagasikara, ny fako sy loto. Ekena, na eo aza ny hoe fanadiovana sy fandaminana ny moron-dalana mbamin’ny fifamoivoizana. Mbola izay talaky maso ihany no ihetsehana. Hafa ny any anaty tanàna: loto tsy loto, fako tsy fako, fofon-dratsy tsy fofon-dratsy…
Tsy vitan’izany, tsy rivotra iainana ihany izao no ratsy fa ny rano avy. Ankoatra ny tsy fahampiana eny ambany tanàna noho ny fahamaroan’ny mponina, rano mavomavo izao no hoe madio ara-pahasalamana sy fisotro. Tian-kano tsy tian-kano… Alahelom-bahoaka! Manginy fotsiny ny fitohanan’ny fifamoivoizana tsy misy izay tena vahaolana maharitra azo antoka.
Alahelom-bahoaka efa ho lava koa ny tsy fandriampahalemana noho ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy. Tsy eto Antananarivo Renivohitra ihany, fa saika manerana ny faritra rehetra. Na an-tanàn-dehibe io, na ambanivohitra. Tsy mampandry fahalemana koa ny rano tondraka isan-taona, ny kere, ny fahatapatapahan-jiro, ny faharatsian’ny lalana… Eo koa ny tsy fisian’ny asa…
Alahelo avokoa izany… Sosialim-bahoaka! Tena manao izay afany sy efany ny mpitondra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga? Mitsara ny vahoaka, raha misitraka inona amin’izay fihatsaram-piainana izay tokoa na tsia. Raha tsy misy ny fiovana, alahelo ho an’ny vahoaka ny fiainana isan’andro, tsy misy fihatsarana hoe mamy ny miaina. Vao mainka izay fiainam-pirenena.
Miangona sy miotrika izay alahelo izay. Ahina hipoaka amin’ny farany, na ho ela na ho haingana. Mandra-pahoviana? Sanatria, mety ho tonga hatrany amin’ny fanomezan-tsiny sy ny fiantsoana tody aza, raha tsy misy fanafany. Mila ala olana: alahelon’ny vahoaka, ala olan’ny mpitondra. Tena mihatsara na misy fanantenana ihany ve ny fiainam-bahoaka amin’izao?
Tsy vitan-dresaka izay, fa mila asa mivaingana sy iainana. Alahelo tsy ambara havana, hono, zakan’ny tompony. Na tsy mila ambara, fa tsy takona afenina. Ambany maso tsy hita? Na odian-tsy hita… Resaka ka atao: tena misy sy iainana ve izay fihatsaram-piainana izay amin’izay lazaina sy atao?